ကွန်ပျူတာ Crash ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၀ ချက်
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်း တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ fatal error ဆိုတာကိုမြင်ဖူးကြုံဖူးကြမှာပါ။
Fatal error တက်လာတဲ့အခါမှာ ထွက်လာတဲ့စာသားက"Enter to return to Windows or press Control-Alt-Delete to restart your computer. If you do this you will lose any unsaved information in all open applications." ပါတဲ့။Microsoft Windows 98 မှာ အများဆုံးတွေ့တတ်ပါတယ်။
Ctrl+Alt+Delete ကိုနှစ်ခါဆက်တိုက်နှိပ်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာ အထက်ကစာသားမျိုးထွက်လာပါလိမ့်မယ်။Enter ကိုနှိပ်ရင် Windows ကိုရောက်သွားမယ်၊ Ctrl+Alt+Delete ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Computer က Restart ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Restart ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် လည်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေ save လုပ်မထားရင်တော့ အကုန်ပျက်ကုန်မှာပေါ့။Windows XP မှာတော့ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲပါတယ်။
Ctrl+Alt+Delete နှစ်ခါနှိပ်လည်း Task Manager ပဲထွက်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဝင်းဒိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး error ကတော့ Blue Screen of Death လို့ခေါ်တဲ့ အပြာပြင်နောက်ခံနဲ့ စာသားတွေတက်လာပြီးချက်ချင်းထိုးရပ်သွားတတ်တာပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Restart လုပ်ရုံမှတပါး အခြားမရှိတော့ပါဘူး။ Save မလုပ်ထားသမျှတော့သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသိထားရင်….အကောင်းဆုံးပါပဲ။
computer crash ဖြစ်နိုင်တဲ့အဓိက အကြောင်းရင်း (၁၀) ခု ရှိတယ်ဗျ။အဲဒီ (၁၀) ချက်ကဘာတွေလဲဆိုတော့
Posted by Kyaw Htin at 15:20